About My Favourite Cryptocurrency Coin...! — TrafficInsider
About My Favourite Cryptocurrency Coin...!
uthantzin in HIVE-MYANMAR • 13 days ago
Hive platform ပေါ်ရှိ ညီအစ်ကို မောင်နှမများအားလုံး မဂ်လာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ...
ဒီတစ်ခေါက် bitcoin စျေး 50000$ကျော်အထိတက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် အခြားသော Cryptocurrency coin စျေးနှုန်းများတက်သွားကြသည်ကို အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါသည်။နည်းနည်းတက်တာနှင့် များများတက်တာသာ ကွာခြားပေလိမ့်မည်။
ထိုသို့စျေးနှုန်းအတက်ပိုင်းတွင် ရက်အတော်များများနေရာယူပြီးသကာလ ယခု လေးရက် ငါးရက်ပိုင်းခန့်တွင် Cryptocurtency စျေးနှုန်းများ တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာခဲ့ရာ bitcoin စျေးသည်ပင် 45000$ အနီးသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပါသည်။
ထိုသို့ စျေးနှုန်းများကျဆင်းလာ၍ အခြားသော coinများ၏ စျေးနှုန်းများလည်း ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်ပြောပြချင်သော အဓိကအချက်မှာ ထိုသို့ Cryptocurrency စျေးနှုန်းများကျဆင်းလာသော်လည်း အလားအလာကောင်းပြီး အားရစရာကောင်းသော Cryptocurrency coin သုံးခုကို တွေ့ရှိနေရပါသည်။
Hive coin မှာ စျေးနှုန်း 1$ကျော်အထိ တက်သွားခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တွင် 0.7 $ အောက်မကျအောင် ထိန်းထားနိုင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ထိုကဲ့သို့ စျေးထိန်းထားနိုင်ခြင်းသည် အလားအလာကောင်းသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်ဟု တိတိကျကျ မပြောနိုင်သော်လည်း Hive coin ၏ ထိုးဖောက်မှုအားနှင့် နည်းစနစ်မှန်ကန်မှုကြောင့်ဆိုတာ သေချာပါသည်။
Solana-SOL ကတော့ မိမိသတိထားမိသောအချိန် စျေးနှုန်း 30$နီးပါလောက်မှစ၍ တဖြည်းဖြည်းတက်လာခဲ့ရာ 70$ ခန့်တွင် တစ်ချက် စျေးတန့်နေခဲ့ပါသည်။ထိုသို စျေးထိန်းထားရာမှ ယခုစျေးနှုန်းအတက်ကာလတွင် 200$ကျော်အထိ စောင့်တက်သွားပြီး ယခုလက်ရှိ 170$ကျော်ခန့်တွင် ရောက်ရှိနေပါသည်။
SOL ၏ ဖွဲ့စည်းပုံကောင်းခြင်း..Backgroundကောင်းခြင်းများနှင့်အတူ ထိုးဖောက်လာပုံများသည် အားရစရာကောင်းပြီး နည်းစနစ်မှန်ကန်သော​ Coin တစ်ခုပဲဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့အမြင်အရ Solana-SOL စျေးနှုန်း ဆက်တက်ဖို့ရှိနေသေးသည်ဟု မြင်မိပါသည်။
နောက်ဆုံး coin တစ်ခုကတော့ TERRA-LUNA coin ဖြစ်ပြီး ထိုcoinလေးသည်လည်း စျေးနှုန်း 20$လောက်မှ 30$နားတွင် တန့်နေခဲ့ပြီး အခြားcoinများစျေးကျနေသောအချိန် ပြီးခဲ့သောသောကြာနေ့တွင် 40$ကျော်အထိ တက်လာပါကြောင်း...
ထို TERRA-LUNA coin လေးအား ဒုတိယ Solana coin လေးထပ်ပေါ်လာပြီဟု တင်စားပြောဆိုနေကြပါကြောင်း...
ဒီတစ်ခေါက် Cryptocurrency စျေးအတက်တွင် ကျွန်တော်ကြိုက်မိသော အားရစရာကောင်းသော Coin သုံးမျိုးအား ပြန်လည်ရေးသား မျှဝေလိုက်ရပါတော့သည်။
သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး အေးချမ်းသောနိုင်ငံ အမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
#cryptocurrency #archon #leo #ecency #trafficinsider #proofofbrain #creativecoin #palnet #neoxian
13 days ago in HIVE-MYANMAR by uthantzin
nyinyiwin 13 days ago
Coin တွေ Token တွေ ပေါများလာသည်နှင့်အမျှ ဈေးကွက်တွင် ရပ်တည်ရေးနှင့် ရပ်တည်နိုင်သူသာ ကျန်ခဲ့မည်။ ထောက်ပံ့တည်ထောင်သောအဖွဲ့စည်းနှင့် နည်းပညာသုံးစွဲမှုသည်လည်း သက်ဆိုင်နေအုန်းမည်။ အချိန်ရသလို လေ့လာထားပီး ဝယ်စုရောင်း Trade လုပ်ကြပီး တစ်ချို့ မြန်မာများ ချမ်းသာနေကြပီ။
uthantzin 13 days ago
ဟုတ်ပ ရသလောက်တော့ ကြိုးစားစုဆောင်းနေပါတယ်ကွီးရွှေရေ။
sheinthu 12 days ago
Hive-engine tokens တွေကို လိုက်ဖို့မလွယ်ဘူး..
@uthantzin! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @sheinthu.
uthantzin 12 days ago
Hive token တွေနဲ့ကို မအားတော့တာ။ !PIZZA
@sheinthu! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @uthantzin.
Did you know you can trade $PIZZA on Hive-Engine, Tribaldex, or LeoDex? (2/10)
htwegyi 12 days ago
ကြိုက်တာရေွးလို့ ဝယ် ဝယ်ပါလေ။
@uthantzin! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @htwegyi.
ပိုက်ဆံပဲ လိုတော့တာ...ဟီး။ !PIZZA
@htwegyi! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @uthantzin.
Did you know PIZZA hasavery active community Discord? (4/10)
Your content has been boosted with Ecency Points, by @uthantzin.
callmemaungthan 12 days ago
စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး ၀ယ်ရတော့မယ်လေ !PIZZA
လေ့လာပြီး ဝယ်တော့မယ်ပေါ့။ !PIZZA
@callmemaungthan! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @uthantzin.
kachinhenry 12 days ago
အခုတော့ ကြည့်ရုံပဲကြည့်ဖြစ်တော့တယ်။ ဈေးတက်သွားရင် ဪ... ဈေးတက်သွားပြီ ပေါ့... ကျလာရင်လည်း ကျလာပြန်ပြီပေါ့။ ကိုယ့်ဆီမှာ Hive ပဲရှိထားတာကိုး။😀😀😀😀 !PIZZA
အမှန်တကယ်တော့ Hive မှာတင်ကို tokenတွေအများကြီးနဲ့ မအားနေတာပါ။ !PIZZA